नेपालमै छ बेलायती डिग्री’ | YesKhabar
नेपालमै छ बेलायती डिग्री’
२०७६ साल श्रावण १० गते, शुक्रबार ०३:२७ PM
तपाईंको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य के हो हेराल्ड र मेरिल्यान्ड कलेजको भ्रमणका क्रममा यो मेरो नेपालको पाँचौँ भ्रमण हो । बेलायतको उल्भरहेप्टन विश्वविद्यालय र यी कलेजबीच विगत पाँच ६ वर्षमा सहकार्य निर्माण गरिएको छ । सोही क्रममा यी कलेजका विद्यार्थीले सिक्स लेबल (छैटौँ तह) को कोर्स पूरा गरेको अवसरमा त्यसको प्रमणपत्र विरतण गर्ने उद्देश्यका साथ म यहाँ आएको हुँ । यति धेरैलाई पुरस्कार वितरण गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ । नेपालमा तपाईंहरुले कस्तो खालको डिग्री प्रदान गरिरहनु भएको छ ?नेपालमा हामीले कम्प्युटर विज्ञान, बिजनेस म्यानेजमेन्टसम्बन्धी इन्टरनेसनल विजनेस विषयको कोर्स सञ्चालन गरिरहेका छौँ । आगामी वर्षमा हामीले साइबर सुरक्षा विषयमा पनि नयाँ कोर्स ल्याउँदैछौँ ।
नेपाल भ्रमणको उद्देश्य तपाईंको विश्वविद्यालयको कोर्स पढाइरहेको कलेजबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिन आउनुभएको भन्नुभयो । तपाईंले नेपाली विद्यार्थीको पठनपाठन चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ ?अहिले मैले ७० जना उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिएँ । हामीले उल्भरह्याम्पन विश्वविद्यायलका विद्यार्थी र यताका विद्यार्थीको पढाइको स्तर तुलना गर्यौं । एउटै कोर्स, एउटै जाँच प्रक्रियाको आधारमा मापन गर्दा हामीले नेपाली विद्यार्थीले धेरै राम्रो गरेको पाएका छौँ । नेपाली विद्यार्थीको स्तर निक्कै उच्च छ ।
मेरो विचारमा नेपाली विद्यार्थीको पढाइको सफलताको रहस्य भनेको तिनको कडा मिहिनेत हो । उनीहरु पढाइलाई गम्भीर रूपमा लिन्छन् । यसमा विद्यार्थीले तिनको घरपरिवारबाट पाइरहेको सहयोगले पनि भूमिका खेलेको छ । बेलायतमा यस कोर्सको मूल्य कति छ ?
बेलायतमा यसको मूल्य अत्यधिक धेरै छ । बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीले यस कोर्सका लागि वार्षिक १० हजार पाउन्ड तिर्नुपर्छ । त्यस अतिरिक्त बसाइ खर्चको छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्छ । हुन त नेपालमा नि बाहिर जिल्लाबाट आउने विद्यार्थीले काठामाडौँमा बसेर पढ्नुपर्दा दैनिक बसाइ नबेहोनुपर्ने त होइन
त्यसअन्तर्गत विद्यार्थीहरुले दुई हप्ताका लागि बेलायतमा रहेका हाम्रा क्याम्पसमा समय बिताउँछन् त्यसमा तिनको भाषा अभिवृद्धि, तालिम सुधार र अन्य शिक्षण विकासका पक्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं । यो निक्कै ठूलो अवसर हो ।
तर भाषा त आफैमा ज्ञान होइन, यो त एकअर्कासँग सञ्चार गर्ने माध्यम हो । त्यसमा विद्यार्थीले अन्य ज्ञान पनि पाउँछन् ?भाषाबारे तपाईंको भनाइ ठीक हो । तर हाम्रो शिक्षणको माध्यम अङ्ग्रेजीमा हुने भएकाले पढाइएका कुराको राम्रो पकडका लागि त अङ्ग्रेजीको राम्रो ज्ञान हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । तपाईंको विश्वविद्यालय कोर्स पढेपछि नेपाली विद्यार्थीले हासिल गर्ने अवसरबारे बताइदिनुस् न ।अवसर त धेरै छन् । नेपालमै बसेर अत्यन्त न्यून खर्चमा बेलायतको डिग्री हासिल गर्न सकिन्छ । यो भनेको विश्वस्तरको कोर्स नेपालमै बसी बसी पढ्ने सुविधा हो । त्यसमा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कम्प्युटर साइन्स र इन्टरनेसनल बिजनेसका कोर्स प्रदान गरेका छौँ ।
आगामी तीन दिनसम्म मौसम बदली भएरै देशैभरि धुम्म हुने
बन्ध्याकरण गराउँदै कुकुरलाई जुकाको औषधि
हिउँदे झरी अझै लम्बिने, फेरि अर्को वर्षा भित्रिँदै
सावधान ! प्लास्टिकका भाँडाबाट निम्तिन्छ गम्भीर स्वास्थ्य समस्या